Vaovao - Ahoana ny famadihana ireo kofehin'ny fiaramanidina amin'ny fizotran'ny milina?
Ahoana ny famadihana ireo kofehin'ny fiaramanidina amin'ny fizotran'ny milina?
Ny kofehin'ny fiaramanidina dia antsoina koa hoe kofehy farany, ary ny endriny nify dia mitovy amin'ny kofehy mahitsizoro, fa ny kofehy fisaka dia matetika ilay kofehy voahodina amin'ny tarehy farany amin'ny varingarina na kapila. Ny làlan'ny fitaovana mihodina mifandraika amin'ny workpiece rehefa manamboatra kofehy fiaramanidina dia spiral Archimedes, izay tsy mitovy amin'ny kofehy silindrisy masinina mahazatra. Izany dia mitaky revolisiona iray an'ny workpiece, ary ny eo afovoan'ny kalesy dia mampihetsika ny elanelana amin'ny workpiece avy eo. Etsy ambany dia hampahafantarinay manokana ny fomba famadihana ireo tadin'ny fiaramanidina milina dingana.
1. Toetra mampiavaka ny kofehy
Ny tonon-taolana misy kofehy dia be mpampiasa mandritra ny milina, miaraka amin'ny kofehy ivelany sy anatiny. Misy karazany efatra lehibe arakaraka ny endrik'ilay mombamomba ny kofehy: kofehy telozoro, kofehy trapezoidal, kofehy serrated ary kofehy mahitsizoro. Araka ny isan'ny kofehy amin'ny kofehy: kofehy tokana sy kofehy misy kofehy maro. Amin'ny milina isan-karazany, ny asan'ireo faritra misy kofehy dia ahitana ireto manaraka ireto: ny iray dia ny fifamatorana sy ny fampifandraisana; ny iray hafa dia amin'ny famindrana herinaratra sy fanovana ny endrika mihetsika. Ny kofehy triangular dia matetika ampiasaina amin'ny fifandraisana sy ny fahamendrehana; ny kofehy trapezoidal sy mahitsizoro dia matetika ampiasaina handefasana herinaratra sy hanovana ny endrika mihetsika. Ny fepetra takian'izy ireo ara-teknika sy ny fomba fanodinana dia manana elanelany kely noho ny fampiasany samihafa.
2. Fomba fanodinana kofehy
Ho fanampin'ny fampiasana fitaovan'ny milina tsotra, mba hampihenana ny fahasarotana fanodinana ny kiran'ny milina, hanatsara ny fahombiazan'ny asa ary hiantohana ny kalitaon'ny fikirakirana kofehy, matetika no ampiasaina ny milina CNC.
Ny baiko telo an'ny G32, G92 ary G76 dia matetika ampiasaina amin'ny fitaovana milina CNC.
Command G32: afaka manodina kofehy tokana-tokana izy, mavesatra ny lahasa fandaharana tokana, ary sarotra kokoa ilay programa;
Command G92: tsingerina fanapahana kofehy tsotra azo tsapain-tanana, izay manampy amin'ny fanamorana ny fanovana programa, saingy mitaky ny banga ny workpiece aloha.
Command G76: Mandresy ny lesoka amin'ny Command G92, ny fitaovana dia azo alefa amin'ny banga ka hatramin'ny kofehy vita amin'ny fotoana iray. Ny fitehirizana ny fotoana fandaharana dia fanampiana lehibe amin'ny fanamorana ny programa.
Ny G32 sy G92 dia fomba fanapahana mahitsy, ary mora hitafy ny sisiny manapaka roa. Izany dia vokatry ny asan'ny roa tonta amin'ny lelany, ny hery fanapahana lehibe ary ny fahasarotana amin'ny fanapahana. Rehefa tapahina ny kofehy misy pitch lehibe dia mitafy haingana ny sisiny manapaka noho ny halalin'ny fanapahana, izay miteraka fahadisoana amin'ny savaivon'ny kofehy; na izany aza, avo lenta ny famaritana ny endrika nify voahodina, noho izany dia ampiasaina amin'ny fanodinana kofehy kely izy. Satria ny fanapahana hetsiky ny fitaovana dia vita amin'ny alàlan'ny fandaharana, lava kokoa ny programa fametahana milina, saingy malefaka kokoa.
G76 dia an'ny fomba fanapahana oblique. Satria dingana iray ny fanapahana amin'ny lafiny iray, mora ny simba sy tonta ny sisiny manapaka, ka tsy mahitsy ny tampon'ny masinina. Ankoatr'izay, raha vao miova ny zoro fanapahana, dia tsy mahomby ny fahamarinan'ny endrika nify. Na izany aza, ny tombony amin'ity fomba fanodinana ity dia ny fihenan'ny halalin'ny fanapahana, kely ny enta-mavesatra ary mora ny fanesorana puce. Noho izany, ny fomba fanodinana dia mety amin'ny fanodinana kofehy goavambe.